Bayaankii al-Qaacida ee dilkii Usaama | isbeddel
← Hakadyo ku lingaxan dilkii Usaama
لماذا يفشل الإسلاميون؟.. (1/2) قراءة نقدية في المنهج والسلوك →
Bayaankii al-Qaacida ee dilkii Usaama
“Intaa ka dib, maalin ka mid maalmaha qiimaha leh ee umadda Islaamka iyo dhacdo aan ku cusbayn sooyaalka halyey yada Islaamka iyo jid diyaarsan oo ay mareen akhyaartii Islaamka ee hore iyo danbe ba ayaa lagu dilay Sheekhii Islaamka abu-Cabdillaahi Usaama bin Muxammed bin Laadin; Ilaahay ha u naxariisto hana dejiyo hoygii dhabta ahaa ee uu ka run sheegaye.”
“Sheekh Usaama ma ahayn Nebi la soo diray qarniga 21aad, waxa se uu ahaa nin muslin ah oo kitaabka xanbaaray aakhrona ku iibsaday adduunyada, sidaan filayno na, aakhiro si dhab ah u raadiyay. Waxa uu Ilaahay kor u qaaday markuu diintiisa kor u qaaday, waxana uu sharfay markuu diintiisa sharfay. Gaalo ayaa ka argaggaxday oo ka baqday markuu Ilaahay ka baqay…umadda Usaama dhashay na madhaleys ma aha, waxa ay dhali doontaa kuwo badan oo sidiisa u ah geesiyaal.”
“Haddii uu nuurka Islaamku u damayo dhimasho qof, waxa uu dami lahaa maalintii uu Nebi Muxammed ‘scw’ dhintay ee carabi diinta ka baxday, ama maalintii Cumar lagu toorriyeeyey mixraabka masjidkii Nebiga, ama haddii kale maalintii Cusmaan lagu dul dilay Musxafkii Qur’aanka ahaa iyo markii Cali la jidgooyeeyey; dhammaan Ilaahay raalli ha ka ahaadee.”
“Haddii aan nahay ururka al-Qaacidah, waxa aan ballan qaadaynnaa in aan dhiigga Usaama noqon doonin mid dhayal ku daatay; waxa aan ballan qaadaynnaa in uu dhiiggiisu noqon doono nacdal eryata Maraykan ka iyo dabadhilifkiisa meel kasta iyo mar kasta…gudo iyo dibad ba. Dhowaan na faraxoogu waxa uu isu rogi doonaa murugo, dhiiggooduna waxa uu ku milmi doonaa ilmadooda, waxaan fulin doonaa dhaartii Sheekh Usaama ee ‘Maraykan iyo cidda ku nooliba ku naaloon maayaan nabad ilaa dadkayaga Falasdiin ku noolaadaan.’
Ma u malaynaysaa in al-Qaacida wax la yeelay?
Ugu yaraan shantii sano ee danbeeyey Sheekhu wax raad ah kuma lahayn dhaqdhaqaaqyada al-Qaacida. Waxa uu ahaa keliya aabbe daalay oo ay u nool yihiin awlaad baarriyiin ah una jajaban addeeciddiisa. Sidan in uu u dhinto ayuu rabay, wayna dhacday. Sida uu Shinqiidi ku yidhi maqaalkii uu shalay ku daabacay alasr.ws ee ‘Kacdoonka carabta iyo dhaxalkii bin Laadin’ waxa uu ku sheegayaa in kacdoonka carabtu liqay aragtidii hubaysnayd ee al-Qaacida; maanta laga bilaabana, buu leeyahay, da’yarta ‘carabtu‘ waxay heleen il kale oo jihaysa…il ka sahlan kana natiijo roon. Waxa uu yidhi “waxa ay al-Qaacida u qabatay Islaamku ma aha wax la sheegi karo marka loo eego khasaaraha ay u geysatay”, laakiin tolow taasi ma runbaa. Abu Axmed oo faallo ka dhiibtay maqaalkaas ayaa isbarbar dhigay khasaaraha ay al-Qaacida soo gaadhsiisay Maraykan iyo ta lagu sheegay in ay Muslimiinta soo gaadhsiisay. Halkan ka akhri maqaalkaas iyo faalladiisa ba: http://alasr.ws/index.cfm?method=home.con&ContentId=11854.
Ugu danbayn waxa i soo jiitay hadal uu yidhi nin miskiin ah oo dorraad maqaaxi aan shaah ka cabayey i soo ag fadhiistay. Waxa uu yidhi: “Walaalo ninkaasi wuxuu doono ha ahaadee, waxa uu innagaga gudbanaa maskax iyo lacag badan oo haddii kale ku bixi lahaa dhibaataynta muslimiinta!”, hore ayaana loo yidhi xikmaddu waxa ay ku jirtaa afka dadka waalan.
Haddaad rabto bayaankii al-Qaacida ka soo saartay dilka Usaama halkan guji: http://www.islammemo.cc/hadath-el-saa/maktal-Osamabenladen/2011/05/06/123458.html#
Posted by Warfaa on Maajo 7, 2011 in Uncategorized